Millennials र नस्लीय सुलह — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
म, जबकि त्यो सुन्दर र अद्भुत छ लाग्छ, म केही हुन यसलाई बनाउन रूपमा रूपमा प्रभावशाली छ लाग्छ छैन. हरेक दिन यो जस्तै संगीत देश भर छन्. त्यहाँ केही सँगै भेला मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकार रही बारेमा भनेर अद्वितीय छ. यो संगीत संग सबै समय हुन्छ, वा घटनाहरु खेल, आदि. जब कलाकार वा एक खेल टीम ध्यान को केन्द्र हो, त्यहाँ संगीत वा त्यो टोली प्रेम द्वारा सँगै ल्याए छन् मानिसहरू. ती मानिसहरूले साँच्चै एकीकृत गर्न छैन. तिनीहरू पनि साँच्चै साथ प्राप्त छैन. तिनीहरू केवल घण्टा एक जोडी को लागि प्रत्येक अन्य सहन गर्न.
त्यो हामी पछि छौं कि एकता र मेलमिलाप को प्रकारको छैन. एकता भन्ने प्रकारको चिरस्थायी छैन. यो केहि को उत्पादन गर्दैन. यी मानिसहरू साँच्चै एक अर्को सेवा छैन. र यो साँच्चै नै तरिकामा ख्रीष्ट र उहाँका सुसमाचारको महिमा गर्न दर्शाउन छैन.
हामी पछि छौं एकता प्रकारको थप चिरस्थायी र थप substantial- थप मायालु छ.
हामी पछि छौं एकता प्रकारको मात्र साधारण सांगीतिक वा सांस्कृतिक गतिविधिलाई द्वारा उत्पादित सकिन्छ. हामी पछि मात्र येशूको सुसमाचार उत्पादित सकिन्छ हुनुहुन्छ एकता प्रकारको.
हामी सुसमाचारको र जातीय मेलमिलाप कुरा गर्दै हुनुहुन्छ किन र पाठ्यक्रम छ, केवल जातीय मेलमिलाप.
यूहन्ना यी शब्दहरू विचार गर्नुहोस् 11:
... येशूलाई राष्ट्रलाई लागि मर्ने भविष्यवाणी, र राष्ट्रलाई लागि मात्र, तर पनि एक विदेश छरिएका छन् जो परमेश्वरको सन्तानको भेला गर्न.
त्यो हामी पछि छौं एकता प्रकारको छ:धेरै र विविध सबै बनेर एक मानिसहरूलाई.
हाम्रो अन्त लक्ष्य केवल एउटै कोठामा कालो र सेतो मान्छे रही छ. जे-Z गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो लक्ष्य भनेर मा शान्ति र येशूले पहिले नै पूरा भएको छ कि एकता र कल मान्छे घोषणा गर्न छ. हामी मान्छे त्यहाँ पूर्णतामा आनन्द र तिनीहरूले जाने चारैतिर घोषणा गर्न चाहनुहुन्छ. अनि हामी हरेक पुस्तालाई कि चाहनुहुन्छ. तर यो केवल सुसमाचारका मार्फत आउन सक्छ.
संक्रमण: सहस्र पुस्ता पाठ्यक्रम छ 2000s गर्न प्रारम्भिक 80s जन्म ती. र हामी (millennials) भनेर सुरुमा राम्रो हो, एकता सजिलो तरिका. तर के गहिरो कि, थप पर्याप्त, र एकता गाह्रो प्रकारको?
Milennial अवरोध खडा
तपाईं आफैलाई जस्तै एक हजार छन् भने, त्यसपछि म तपाईं हामी मेलमिलाप लागि लड्न जारी तरिकाहरू विचार गर्न. र तपाईं एक हजार हुनुहुन्छ भने (उर्फ तपाईं पुरानो हुनुहुन्छ), त्यसपछि सायद तपाईं यस ठूलो बाइबलीय दर्शन गर्न millennials कल गर्न कसरी ध्यान गर्न सक्छन्. त्यो pastors लागि जान्छ, चर्च सदस्य, आमाबाबुले, मित्र, आदि.
त्यहाँ जातीय मेलमिलाप र यो पुस्ता सोचिरहेका केही चुनौतीहरू छन्. यो सजिलो दुवै मिलाप मान्छे कल गर्न र एउटै अरूलाई कल तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न छ. यहाँ तीन अद्वितीय अवरोध हो म यो गर्न millennials कल मा हामी विचार:
1. केही millennials लाग्छ जातीय तनाव हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले समस्या छ.
पक्कै कुराहरू धेरै फरक तिनीहरूले एक पटक थिए भन्दा यो देशमा अब. मेरो बाजे म विश्वास गर्न सक्दैन भनेर मलाई कथाहरू भन्नुभयो छ,को नागरिक अधिकार आन्दोलन मेरा पिता protested, र मेरी आमाले मलाई जा अस्वीकार होटल कोठा उहाँ सम्झनुहुन्छ को कथा भन्छ एक child.Those छैन एकदम मेरो अनुभव हो रूपमा. वैध अलगाव अब एक वास्तविकता छ. र सामान परिवर्तन भएको छ.
त्यसैले, हामी धेरै हामी यस्तो पूर्ण बिभिन्न समयमा हुनुहुन्छ भनेर मान, जो एक सान्दर्भिक कुराकानी अब दौड सम्बन्ध बनाउँछ. एक Rapper भने, "त्यहाँ इन्टरनेट संग कुनै नस्लवाद छ. नस्लवाद मात्र थियो-यो शायद जस्तै पाँच पुस्ताका पहिले छ ... लागि मैले पुस्ताका भन्न छैन नस्लवाद छ. हाँ, जस्तै पाँच पुस्ताका पहिले. नस्लवाद भन्दा भएको. यो छ कि यो गर्न मा पकड मा राख्न पुरानो मानिसहरूको ... "
यो धेरै millennials के लाग्छ हामी एक पोस्ट-जातीय समाज अहिले हुनुहुन्छ ... छ। ". हाम्रो पुस्ता मा Interracial विवाह धेरै छन्. र पाठ्यक्रम हामी कालो अध्यक्ष छन् के. यो सबै विगतमा छ। "
दुःखको कुरा, केही हाल अध्ययन millennials विगतका पुस्ताका भन्दा समानता थप ओठ सेवा दिन भनेर देखाएका छन्, तर हामी हाम्रो आमाबाबुले थिए रूपमा मूलतः बस पूर्वाग्रह रूपमा अझै पनि हुनुहुन्छ. यद्यपि, हामी पोस्ट-जातीय हुनुहुन्छ लाग्छ, जो एक खतरनाक संयोजन छ.
पक्कै, पनि ओक्लाहोमा fraternity बीचमा सजीव मन्त्र जस्तै हालका घटनाहरू नस्लवाद हाम्रो पुस्ता मा राम्रो तरिकाले जीवित हुनुहुन्छ भन्ने र देखाउने. तर दुःखको कुरा, त्यो सरासर छ नगरेसम्म, हामी यसको अस्तित्व इन्कार.
जातीय पूर्वाग्रह अक्सर थप सूक्ष्म छ, तर यो कम पापी छ होइन. यो मात्र अघि भन्दा बढी गुप्त छ मतलब. र यो लडाइँ गर्न मुश्किल बनाउन सक्छ.
2. केही millennials लाग्छ सामाजिक मिडिया गतिविधि पर्याप्त छ.
सामाजिक मिडिया एक अविश्वसनीय उपहार हो. हामी सामाजिक मिडिया चुनौती पनि देखेका र एशिया | मा हाल जातीय मुद्दाहरू प्रकाश मा मान्छे परिचालन गर्नुभएको. तर मेरो पुस्ता सजिलै बस सामाजिक मिडियामा राम्रो कुरा साझेदारी गर्न यो पर्याप्त छ सोच पासोमा फस्न सक्छन्. केही मानिसहरू यस सुस्त-tivism कल:कार्यकर्ता Retweet गर्न, प्रचारक 'उद्धरण, यी विषयमा र ब्लग पोष्टहरू, र त्यहाँ रोक्न.
त्यो पर्याप्त छैन! हामी वास्तवमा भन्ने परे कारबाही गर्न. यो अनलाइन बारेमा वा हाम्रो मित्र बीच कुरा धेरै राम्रो छ, तर यो पर्याप्त छ. र अन्य ethnicities र संस्कृतिका साथ सामाजिक मिडिया मित्रता भएको राम्रो छ, तर यो पर्याप्त छैन निश्चित छ.
3. केही millennials परमेश्वरको वचन हाम्रो दिनमा पर्याप्त छ कि लाग्छ छैन.
सहस्र मसीहीहरूको लागि, हामी यसलाई एक पटक रूपमा बाइबल जहाँ सम्मान छैन एक दिन बस्ने. किनभने त्यस, बाइबल हाम्रो आफ्नै विश्वास shrinking छ. डा मा. राजाको दिन, मान्छे धर्मशास्त्रीय सत्य प्रतिक्रिया, तर हाम्रो मा छैन. यो एक विभक्त छ. तिनीहरूले के हामी साँच्चै आवश्यक फरक छ भनेर तर्क, थप समावेशी सन्देश. र एउटा सन्देश कसरी कुनै पनि प्र एक वास्तविक फरक बनाउन मानिन्छ छ?
हामी थप मसीही सुसमाचारको घोषणा आवश्यक छैन, धेरै मानौं. तिनीहरूलाई, सबै हामी आवश्यक मसीही कार्य --एज छ सुसमाचारको घोषणा गर्न कार्य छ भने. हामी निश्चित प्रचार भन्दा बढी आवश्यक, तर हामी सुसमाचार प्रचार त्याग्न सक्दैन, वा हामी मात्र म बारेमा माथि कुरा प्रकाश क्षणिक एकता प्रकारको हुनेछ.
खैर, ती तीन अवरोध हो म हामी जातीय मेलमिलाप गर्न millennials कल संग सामना लाग्छ. त्यसैले, त्यसपछि हामी के गर्न हो? यदि हामी चर्च नेताहरूले वा चर्च वा आमाबाबुले सदस्य हुन्, हामी कसरी मेरो पुस्ता को जीवनमा यो सम्बोधन गर्छन्?
यहाँ तीन सरल समाधान हो. म यी ठेगाना प्रत्येक लाग्छ सबै तीन माथिको समस्या. र म घर प्रेस चाहनुहुन्छ मुख्य कुरा मात्र सुसमाचारको हामी पछि छौं एकता प्रकारको उत्पादन छ.
समाधान #1: प्रचार रिकन्सिलेसन सुसमाचारको
मलाई थाहा छ कि स्पष्ट देखिन्छ, तर यो कल्पित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण र अधिक देख्यो.
म एउटा नयाँ चर्च रोपेर मदत गर्न अटलान्टा सारियो गर्नुभएको, तर पहिले म D.C मा एक चर्च मा कर्मचारी थियो. र चार वर्ष त्यहाँ एक सदस्य. त्यहाँ मेरो समयमा, म चर्च विविधता मा एकदम बढ्न देखे, र यसलाई हेर्न सुन्दर कुरा थियो. त्यहाँ बढी कालो सदस्य थिए, चिनियाँ सदस्य, वृद्ध सदस्यहरूको, र साना सदस्य. जहाँ परमेश्वरको सुरक्षित थियो मानिसहरूलाई यो पागल विविधता थियो यो बपतिस्मा हेर्न ठूलो थियो.
यो सिद्ध विविधता थियो, तर यो सुन्दर थियो. र म यो भयो लाग्छ, किनभने चर्च जातीय मेलमिलाप कुरा हाम्रो अधिकांश समय खर्च छैन, तर हामी हाम्रो अधिकांश समय बिताए किनभने मेलमिलाप को धेरै सन्देश कुरा.
विविधता किन हुन्छ?
यूहन्ना भन्छन् 12:
तर म, जब म पृथ्वीबाट माथि उठाएर छु, आफैलाई सबै मानिसहरू आउनुहुनेछ
येशूले अप उठाएर बेलामा भने, जब उहाँले क्रूसमा मर्ने अर्थ, उहाँले सबै मानिसहरू आकर्षित हुनेछ. उहाँले मानिसहरूको केही प्रकार भन्न भएन, तर सबै मानिसहरू. उहाँले यहाँ भेद गर्नु छैन. प्रेरित यूहन्नाले शब्द प्रयोग गर्दा "सबै,"यो होइन हरेक एक व्यक्ति, तर सबै मान्छे समूह. बस इस्राएलका भन्दा बढी, तर अन्य सबै राष्ट्रका साथै. परमेश्वरको विविध मानिसहरूका सिर्जना, र येशू आफैले विविध मानिसहरूका आकर्षित गर्न मृत्यु.
यो यहाँ हाम्रो कुराकानी को हृदय. हामीलाई अलग गरेको कुरा पाप हो. नस्लवाद र जातीय तनाव र जातीय अलग मूल पाप हो. र ख्रीष्टको पहिले नै पाप सम्हाल्न छ सबै मानिसहरू लागि एक मृत्यु झटका. हामी त्यो सन्देश घोषणा गर्न.
अन्यथा, हामी एकता एक फरक प्रकारको सिर्जना गर्न प्रयास भन्दा येशूले पहिले नै सिर्जना गरेको छ एकता अँगालेर हाम्रो समय बर्बाद छौँ. प्रकाश5येशू भन्नुहुन्छ, "... हरेक कुल देखि परमेश्वरले मानिसहरूलाई लागि खरिद, भाषा, मान्छे, र राष्ट्र। "यो परमेश्वरको योजना सबै साथ भएको छ, र हामी यसलाई बताउन प्राप्त!
तपाईं आफ्नो सेवकाईमा भनेर सन्देश परेर गरिएको छ भने मलाई आश्चर्य. यो हाम्रो प्राथमिक हतियार हो.
सुसमाचार एकता हामी धेरै भन्दा धेरै गहिरो जान्छ महसुस. एफिसी मा 4, पावलले यस गहिरो एकता वार्ता. उहाँले वचन प्रयोग सबै पटक नोट "एक।"
त्यहाँ एक शरीर र एक आत्मा-बस तपाईं एक आशाले तपाईंको कल-एक प्रभु पर्छ भनेर भनिन्छ थिए, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, एक परमेश्वर र पिता सबै को, जो सबै भन्दा र सबै मार्फत र सबै छ. एफिसी 4:4-6
त्यो हामी गर्न प्रयोग गरिरहनु भएको अन्य एकता भन्दा धेरै गहिरो छ. र सुसमाचारको भनेर गहिरो तरिकामा हामीलाई reconcile गर्न आवश्यक छ.
हामी millennials आवश्यक नै सुसमाचारको अरू सबैलाई गर्छ. र यो साँचो एकता उत्पादन. त्यसैले, गरेको यो भरोसा र यो घोषणा जारी गरौं, हाम्रो संस्कृति सुन्न चाहनुहुन्छ गर्दैन भने पनि. को व्यापक संस्कृति मा, हामी कानून हेर्न चाहन्छन्, र हामी न्याय हेर्न चाहन्छन्. तर सबै को न्यायाधीश पहिले नै तल हात छ के बिर्सनु हुँदैन गरौं.
केवल सुसमाचारका एकता को यस प्रकारको सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ. ठिक छ, त्यसैले अन्य के समाधान बस घोषणा परे छन्?
समाधान #2: सुसमाचारको प्रेम र समझ लागि लड्न
हामी सबै जन मा येशूको शब्दहरू धेरै परिचित हुनुहुन्छ 13.
यूहन्ना हेर 13:34-35. "एउटा नयाँ आज्ञा म तपाईंलाई: एक - अर्कालाई माया गर्नु. म तपाईंलाई प्रेम छ रूपमा, त्यसैले तपाईं एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ. यो सबै मानिसहरू तपाईं मेरा चेलाहरू हौ भनी थाहा हुनेछ, तपाईं एकअर्कालाई प्रेम भने। "
तर यो अर्थ के, र यो वास्तवमा जस्तो के गर्छ? उहाँले यहाँ वार्ता यो प्रेम कोही लागि एक पवित्र स्नेह र आफ्नो राम्रो गर्न निःस्वार्थ प्रतिबद्धता छ. हामी आपसमा कि पवित्र स्नेह हुनुपर्छ. हामी प्रत्येक अन्य असल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ. हामी थप ख्रीष्टको थाहा आपसमा चाहनुहुन्छ गर्नुपर्छ, बढ्न थप, र लहलह बढ्न. हामी एक अर्को संग हरेक अन्तरक्रिया प्रेम विशेषता हुनुपर्छ.
तर येशूले एउटा प्रेम अर्को भन्न गर्दैन; उहाँले हामी एकअर्कालाई प्रेम हो कसरी निर्दिष्ट गर्दछ. कसरी: जस्तै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो. वाह! उहाँले हाम्रो लागि गरिब भए, हाम्रो लागि पापी संसारमा सहेका, र हाम्रो लागि आफ्नो जीवन राखे. अनि उहाँले हामी त्यसैगरि प्रत्येक अन्य प्रेम गर्नुपर्छ भन्छन्. र कसरी मान्छे हामी उहाँका चेलाहरू हुन् भनेर थाहा हुनेछ छ.
यो मायालु एक अर्को तरिका को एक नम्बर मा नै बाहिर fleshes. नयाँ करारका बाँकी एक सानो तर यो प्रेम जस्तो देखिन्छ के शरीरका राख्दछ.
गलाती 6:2 – भालु एक एकअर्काको बोझ
एफिसी 4:32 – एक अर्को दयालु हुन
फिलिप्पी 2:13 – आफैलाई भन्दा राम्रो अरूलाई विचार
हिब्रू 3:13 – दैनिक एकअर्कालाई प्रोत्साहन
जेम्स 5:16 – एक अर्को लागि प्रार्थना
1 पत्रुस 3:8 – भाइहरूलाई प्रेम
त्यो गम्भीर प्रेम हो.
म हुँ जो को भाग बेवास्ता नगर्नुहोस्
यहाँ कुरा हो, हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामी प्रत्येक अन्य ठेगाना छ. हामी प्रत्येक अन्य बुझ्न छन्. म मेरो भाइ गरेको बोझबाट कसरी सहन सक्छ, यदि म आफ्नो बोझ के-के हुन् थाहा छैन? म तपाईं कसरी तिर दयालु हुन सक्छ, यदि म तपाईं वजन को दबाबको थाहा छैन? प्रत्येक अन्य बुझ्ने हामीलाई राम्रो एकअर्कालाई प्रेम गर्न मद्दत गर्छ. (दोहोरिने)
"म पनि कालो रूपमा हेर्न छैन।"
वर्ष को एक जोडी पहिले, म white.We क्षण को एक mushy भ्रातृप्रेम प्रकार भएको थियो गर्न हुन्छ जो मेरो एउटा नजिकको साथी संग कुराकानी भइरहेको थियो. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, "मेरो लागी, तपाईं बस मेरो साथी यात्रा हुनुहुन्छ. म पनि तिमी काले रूपमा हेर्न छैन। "अब म उहाँले मलाई कुराकानी गर्न खोजिरहेका थिए के बुझ्न. उहाँले मलाई प्रेम गर्न कुनै पनि कम आफ्नो अन्य कुनै मित्र भन्दा थियो. तर अन्य पक्षमा, म अरूलाई हेर्न एउटा असहयोगी तरिका हो लाग्छ. यो मेरो एकल साथी एक भन्दै मलाई जस्तै हुनेछ, "तपाईं म त तिमी जनी रूपमा हेर्न थाहा. म पनि तपाईं एकल हुनुहुन्छ याद छैन। "खैर, उहाँले एकल छ. र आफ्नो संघर्ष को धेरै, इच्छा, र चुनौतीहरू उहाँले एकल भन्ने तथ्यलाई गर्न केही जाँदैछन्.
र त म मेरो friend- उहाँले me- गर्न वार्ता हरेक समय मेरो blackness बारेमा मुख्य रूप सोच्न छैन प्रोत्साहन तर यो त्यहाँ छैन जस्तै पनि बहाना छैन. किनभने यो छ, र यो मेरो जीवन असर गर्छ.
1. किनभने म कालो छु. म कालो हुनुको रुचि. अनि परमेश्वरले मलाई यो मार्ग बनाएको.
2. त्यहाँ कालो हुनुको साथ आउन अद्वितीय अनुभव हो, वा विद्यार्थी रहेको, वा आमा, वा एकल हुनुको.
मेरो कालो अनुभव
हामीलाई केही हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै हाम्रो नस्ल सोच्न छैन. अनि त्यो राम्रो छ. तर त्यसो हामी अरूलाई छन्. र म मात्र आफु र मेरो काले अनुभव को लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. म सबैको लागि कुरा गर्न सक्दैनन्.
त्यहाँ एक अतिरिक्त बोझ भन्ने म, र धेरै कालो मान्छे, पूरा गर्न. हामी हाम्रो देश मा दमनकारी इतिहास थाह बोझ बोक्न: कि अश्वेतहरुको पूर्ण मान्छे छलफल थिएनन्, हाम्रो मुद्रा मा तथ्याङ्कले केही सम्पत्ति जस्तै कालो मान्छे स्वामित्व कि, थाह नस्लवाद अझै छ, र कहिले काँही कि नस्लवाद एक प्राप्तकर्ता हुनुको.
यो एउटा जागरूकता तपाईं कसैले प्रेम बाटो परिवर्तन.
कुरा मेरो बारेमा ग्रहण गरिएको छ जब धेरै पटक त्यहाँ भएको(छैन साँचो हो कि) बस मेरो रूप मा आधारित. धेरै चोटि, यसलाई म एक अपराधी whenI देखि थप हुन सकेन छु भनेर ग्रहण गरिसकेका. यसलाई म लाटो र अशिक्षित छु भनेर ग्रहण गरिसकेका थुप्रै चोटि. यसलाई ग्रहण गरिसकेका थुप्रै चोटि म मेरो सेतो साथीहरूले गर्न कमसल छु वा म राम्रो छैन भनेर. र यो स्पष्ट मलाई गरेका छन् कि जो लाग्छ मानिसहरूलाई. हानिकारक तरिकामा मेरो प्रियजनहरूलाई सन्दर्भ मान्छे उल्लेख छैन. सुनेपछि जस्तै मान्छे भन्न, "तपाईंको बहिनी थोडे राम्रो छ, कालो केटी लागि म अर्थ। "कालो कम सुन्दर छ भने. मेरो जीवन मा र धेरै को जीवनमा यो ढाँचाको छन्. म मेरो छोरा संग भाषण गर्न हुनेछ, बस जस्तै मेरो पिताजी मेरो साथ गरे, होसियार उसलाई चेतावनी र उहाँले कालो छ बस किनभने उसलाई मन कसले मानिसहरू छन् कि. र यो म पूरा गर्न भनेर एउटा अतिरिक्त बोझ छ.
किन अनुभव कुरा गर्छ?
तर किन यो कुरा गर्छ? म यो सबै किन बताउन छु? त्यस आज्ञाको किनभने एकअर्कालाई प्रेम गर्न. बस जस्तै तपाईं एक अद्वितीय तरिकामा आफ्नो आमा प्रेम, र आफ्नो प्राचीन, वा कम-भाग्यवान् मान्छे, तपाईं अद्वितीय तरिकामा फरक ethnicities प्रेम गर्नुपर्छ. हामी अद्वितीय सुख छ, बोझबाट, र अनुभव, र तपाईं अरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन तरिकाले तपाईं खारेज वा आफ्नो अद्वितीय अनुभव बेवास्ता भने.
म जो हाम्रो चर्च मा सामेल हुने थियो चिनियाँ बहिनी कुरा सम्झना. त्यो मात्र छोटो अवधिको राज्य अमेरिका मा भएको थियो, र त्यो प्रवचन संग उनको अनुभव बारे कुरा रूपमा, त्यो उनको पालन गर्न को लागि यो भएको थियो कसरी कठिन बताए. म यसको बारेमा कहिल्यै सोचेको भनेर गहिरो अन्यथा. यो पूर्ण रूपमा म हाम्रो चर्चमा उनको जस्तै बहिनीहरू को अनुभव हेरिएको बाटो परिवर्तन, र यो मलाई तिनीहरूलाई कसरी प्रेम गर्न राम्ररी थप सोच्न मदत.
केवल सुसमाचारका बलिदानको प्रेम को यस प्रकारको उत्पादन गर्न सक्छन्. त्यसैले, हामी यो काम गर्न येशूलाई जान आवश्यक. यो कठिन हुनेछ, जो मेरो अन्तिम बिन्दु मलाई ल्याउँछ.
समाधान #3: यो सरल मान छैन
विविधता सुसमाचारको को सुन्दरता र सत्य देखाउँछ. कसैले हाम्रो चर्चमा आउँदा, र तिनीहरूले विविधता-एक तिनीहरूले मा देख्नुभएन विविधताको प्रकारको संसारमा-तिनीहरूलाई सुसमाचारको महिमा को एक झलक दिन्छ हेर्न. धर्मशास्त्र यसो भन्छ प्रभुको नाउँ पुकार्ने कसैले सुरक्षित-हुनेछैन को बस एक समूह मान्छे-र एक स्थानीय शरीर मा प्रदर्शन गर्न सक्षम जब यो सुन्दर.
विविधता कुराहरू कठिन बनाउँछ
विविधता एक सुन्दर कुरा हो; तर यो सजिलो छ. हरेक चर्च-पनि मान्छे नै नस्ल को हो, उमेर, हामी पापी छौं किनभने background- मुद्दाहरू छ. तर विविधताको यसको आफ्नै अद्वितीय समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ. हामी सबै हाम्रो आफ्नै पृष्ठभूमिबाट ल्याउन, अनुभव, presuppositions, पक्षपात, र हामीलाई साथ सामान. र कहिले काँही कि द्वन्द्व सिर्जना.
धर्मशास्त्र यो द्वन्द्व अनजान छैन. पनि प्रारम्भिक चर्चमा, त्यहाँ जातीय लाइनहरु मार्फत डिभिजनका थिए (प्रेरित लिपिबद्ध रूपमा). त्यसैले, किनकी यो कठिन हुनेछ, यहाँ कसरी ती कठिनाइहरू मार्फत काम गर्न को लागि केही अनियमित सुझाव:
नस्लीय सुलह लागि व्यावहारिक सुझाव
1. धेरै फरक फरक छन् मानिसहरू व्यवहार नगर्नुहोस्.
आफ्नो मतभेद प्राथमिक छैनन्. बुझ्न खोज्नुहोस्, तर अझै पनि सामान्य तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया. म Philly फिर्ता थियो जब म एक समय को विचार गर्न सक्नुहुन्छ, एक प्रोफेसर सधैं अलग मलाई कुरा जब. उहाँले एक साथ अन्य विद्यार्थी अभिवादन थियो, "शुभ - प्रभात,"वा, "राम्रो हेर्न।" तर उहाँले मलाई र अचानक भन्छन् सबै देख्न, "माथि कुकुर के?"वा" के मेरो मानिस मा गइरहेको छ?"
उहाँले जस्तै महसुस बिना मेरो मतभेद सजग भएको छु सक्छ फरक मलाई कुरा थियो.
2. STEREOTYPES मान छैन.
जातीय समूह, उमेर समूह, आदि. माथि व्यक्तिहरूको गरिन्छ. मानिसहरूको अनुभव भिन्न छन्. केही STEREOTYPES हास्यास्पद र हानिरहित छन्, तर अरूलाई आपत्तिजनक छन्. एक व्यक्ति रूपमा प्रत्येक व्यक्ति चिन्न.
3. तपाईंले मात्र जस्तो गर्ने मानिसहरूलाई बगालको छैन प्रयास.
जानीबुझी तपाईं जस्तै देखिने छैन मान्छे संग सम्बन्ध बनाउन. तपाईंले मात्र भन्दा स्वाभाविक जडान हुनेछ मान्छे समय बिताउन गर्न प्रलोभनको लड्न. चर्च पछि, जानबूझ फरक छन् मान्छे संग कुरा. एउटा जिम्मेवारी रूपमा, तर उनि शरीर एउटा उपहार हो किनभने बस र तिमी जस्तै हो जो ती मानिसहरूले मन.
4. जानीबुझी मान्छे बुझ्न खोजी.
गहिरो relationally जानुहोस्. प्रश्न सोध्नुहोस. ध्यान दिएर सुन्न र मानिसहरूको अद्वितीय अनुभव समानुभूति. तपाईं केहि को संदेह हुनुहुन्छ भने पनि कसैले भन्छन्, यसलाई खारेज अघि, तिनीहरूलाई सुन्न र बुझ्न खोजी
5. कठिनाइ र बढ्दै पीडा मार्फत लागिरहन.
विविधता कठिन छ, हामी दौड / नस्ल बारेमा कुराकानी सुरु विशेष गरी जब. केही कुराकानी काल प्राप्त गर्न सक्छन्. आपसमा दयालु हुन. सधैं सबै भन्दा राम्रो र खराब ठहरिनु. कसैले खोजी भने के तपाईं offends बुझ्न, दयालु र रोगी तिनीहरूलाई साथ. तिनीहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ. पर्खाल माथि राखे छैन र यो असम्भव मान्छे नजिक प्राप्त र बुझ्न लागि बनाउन. यो एक दुई-तरिका सडक छ.
कसैले बुझ्न खोज्दै गर्दा, प्रश्न वा गलत कुरा भन्न नडराऊ. तपाईं आफ्नो शब्द ध्यान दिएर छनौट गर्नुपर्छ, तर तपाईं जोखिम लिन र आफ्नो भाइबहिनीहरू दयालु हुन आशा गर्नुपर्छ.
माथि दिन छैन गाह्रो हुँदा. त्यो एकीकृत विविधताको सट्टा एक मात्र सहिष्णु विविधता जान्छ.
6. तपाईं अन्य जात / उमेर / socioeconomic समूह बारे अनुमानको छ भने आफैलाई सोध्नुहोस्.
त्यो हामी सबै सोधेर गर्नुपर्छ प्रश्न छ. सोच्न कार्य थप biblically / एकदम. हामी सबै हामीलाई भन्दा फरक छन् हामी मान्छे सोच्न बाटो प्रश्न गर्नुपर्छ, विभिन्न सांस्कृतिक र जातीय सहित. तपाईं सडक मा कसैले पास के आपत्ति आउँछ? तपाईं पसलमा तिनीहरूलाई देख्न गर्दा दिमागमा के आउँछ? हामीले प्रश्न र मान्छे परमेश्वरले तिनीहरूलाई देख्नुहुन्छ बाटो हेर्न प्रयास गर्नुपर्छ.
7. जा कुराकानी राख्न.
यो धेरै कुराकानी को एक हुनुपर्छ. यो कुनै पनि हालतमा एक व्यापक छलफल गरेर छैन. यो अन्य छलफलहरू सुरु गर्न चाहनुभएको छ. विविधता दुर्घटना मा आउँदैन एकता. र यदि हामी यो बारेमा कहिल्यै कुरा, हामी सजग हुने छैन र यो तिर काम. शेयर चिन्ता र संघर्ष, तर पक्का दया यी कुराकानी गर्न श्रम, संवेदनशीलता, अनुग्रह, र प्रेम.
हामी यो कुरा भने, विगतमा हामीले यो समस्या पहिले नै सम्हाल्न गरिएको मान गर्न जारी खतराबारे चलान. अनि जब समस्या हो त्यहाँ, तर हामी अनजान छौं, यसलाई आफ्नो घरमा बिजुली समस्या जस्तै छ. तपाईं आगो गर्न एक दिन उठ सक्छ! हामी पर्याप्त राम्रो लड्न सजग हुनु आवश्यक छ.
8. पद मनन र प्रार्थना परमेश्वरले तपाईंलाई एकता लागि एक आवेग दिनेछु.
एकता ठूलो सम्झौता हो, त्यसैले हामी परमेश्वरको यसको लागि हाम्रो आवेग बढ्न भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ. हामी एक मन आज्ञा हुनुहुन्छ. हामी ख्रीष्टमा एक हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता महसुस गर्न आज्ञा हुनुहुन्छ. यो हामी सिर्जना अवधारणा छैन. एफिसी हेर 4. उत्पत्ति अब्राहाम परमेश्वरको वैश्विक प्रतिज्ञा हेर. यो सबै प्रकाश मा समाप्त हुन्छ कसरी हेर. र प्रार्थना परमेश्वरले एकता यस प्रकार को लागि एक आवेग तपाईं दिन्छु.
तर, पहिले नै धेरै पटक हामी भने गर्नुभएको रूपमा, मात्र सुसमाचारको बलिदानको प्रेम र एकता को यस प्रकारको उत्पादन गर्न सक्छन्.
हामी हेर्न संसारको लागि प्रदर्शन मा यो सुसमाचारको राख्न श्रम गर्न चाहनुहुन्छ.
उमेर र समय मा कि झनै विभाजित देखिन्छ, प्रभु प्रयोग गर्न सक्छन्. परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ. र परमेश्वरको मान्छे परमेश्वरले आफ्नो वचनमा सादा बनाउन प्रयोग एउटा दृष्टान्त जस्तै हो. उहाँले उहाँको सुसमाचारको brighter चमक बनाउन प्रयोग.
केवल एउटै कोठामा अश्वेतहरुको र सफेद, तर एउटै परिवारका मा अश्वेतहरुको र सफेद.
त्यो गहिरो, truer एकता.
माइकल • अप्रिल 9, 2015 मा 11:47 छु • जवाफ
केही उत्कृष्ट विचार यहाँ. म सेतो छु, तर उच्च विद्यालय गए र लगभग सबै कालो मान्छे संग फुटबल खेलेका. त्यसैले, म मेरो उच्च स्कूलमा अल्पसंख्यक मा निश्चित थियो (र लकर-कोठा मा टाढा द्वारा). को अर्कान्सस-Missisippi डेल्टा मा बढ्दै, दौड खिचलो थिए (र अझै पनि छन्) सतहमा सही. तपाईं लगातार अन्य बारेमा दुवै पक्ष बाट नकारात्मक टिप्पणी सुन्न. यो दुःखी छ. के कठिन छ विपरीत दौड बाहिर पुग्न प्रयास को लागि आफ्नो दौड द्वारा ostracized भइरहेको छ. म कसरी नस्लवाद पछिल्लो यो चर्च भित्र कुरुप टाउको छ सक्छन् पहिलो हात देखेको छु. यो भयानक छ. म जस्तै मान्छे को लागि आभारी छु, यात्रा, जो प्रयास र सुसमाचार आधारित दृष्टिकोणबाट यी मुद्दाहरू को सामना गर्नु इच्छुक छन्. हामी हाम्रो भाइ प्रेम भनिन्छ, कुनै कुरा के छाला रंग हाम्रो भाइ हुन हुन्छ. म बहु-जातीय चर्च डेल्टा मार्फत अवस्थित कि दिन को लागि लामो. तर, हामी त्यहाँ प्राप्त मात्र तरिका एक दैनिक आधार मा सुसमाचार बाहिर बस्न खोजिरहेका र यसको बारेमा साँच्चै जानिजानि भएर हो.
रबिन • अप्रिल 9, 2015 मा 3:12 बजे • जवाफ
प्रेम यो, यात्रा! म भर्खर एक जातीय मेलमिलाप सर्कल प्रमुख सुरु गर्नुभएको र भने आफ्नो पाठकहरूलाई केही मुक्त पाठ्यक्रम चाहनुहुन्छ, तिनीहरूले डाउनलोड गर्न यो साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ http://www.latashamorrison.com/2015/02/grace-based-bridge-building-pt-1/
तपाईं हाम्रो मतभेद र एकता लागि धर्मशास्त्रीय आधार बेवास्ता छैन भन्नुभएको कुरा प्रेम!
“केवल एउटै कोठामा अश्वेतहरुको र सफेद, तर एउटै परिवार मा अश्वेतों र सफेद।” आमिन!
KwasiAgbottah • अप्रिल 9, 2015 मा 3:23 बजे • जवाफ
कस्तो राम्रो. त्यसैले आवश्यक. त्यसैले सहयोगी. म यी कुराहरू लागू हुनेछ. धन्यवाद.
Rolfstlund • अप्रिल 10, 2015 मा 6:47 छु • जवाफ
म यसलाई भन्नुभयो गर्नुभएको अघि – यात्रा ली एक साँच्चै राम्रो प्रचारक छ र एक स्पष्ट मा यो गर्न, सरल र साँचो बाटो …. अनमोल !!!
डेमियन • अप्रिल 30, 2015 मा 4:28 बजे • जवाफ
उल्लेखनीय, स्पष्ट र संक्षिप्त.
Otis • जुन 27, 2015 मा 8:39 छु • जवाफ
आज यो वेबपेज मा मेरो पहिलो पटक हो. म Lecrae मार्फत पहिले 3years बारेमा यात्रा ली संगीत निम्न छन्. म आफ्नो जीवन लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र म यो शिक्षा साँच्चै आनन्द उठाएका. म घाना जहाँ बस्नुहुन्छ 99% हामी अश्वेतहरुको छन् तर हाम्रो समस्या यहाँ नस्ल बढी छ।(हुनत पर्यटकहरुका लागि घाना कुनै जातीय युद्ध।) म केही रूपमा हेरिएको छन् चाहनुभएको ” सही मान्छे”. म मेरो दैनिक जीवनमा लागू हुनेछ जुन यस शिक्षण देखि ALOT सिकेका. तपाईं यात्रा धन्यवाद र परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष.
नाम • डिसेम्बर 14, 2016 मा 3:39 छु • जवाफ
नमस्कार, Looking मित्र !
Lacey • सक्छ 14, 2017 मा 10:13 छु • जवाफ
म सधैंभरि यो जस्तै पोस्ट लागि looknig गरिएको छ (र एक दिन)
Mwiza • जनवरी 1, 2017 मा 2:51 बजे • जवाफ
ठूलो शिक्षण यात्रा. मलाई मन पर्यो. (जाम्बिया)
ओलिभिया • जुन 18, 2018 मा 12:32 छु • जवाफ
म यो कुराकानी र शिक्षण प्रेम. मैले मेरा तीन छोराछोरी संग यस्तै कुराकानी भएको थियो. म हामी येशूको जस्तै प्रेम गर्नुपर्छ कसरी अझ यो लेख प्रयोग गरिनेछ. म यात्रा सुसमाचार बाहिर बस्ने र त्यसै गर्न अरूलाई सिकाउँदा लागि कृतज्ञ छु. परमेश्वरले तपाईंलाई सबै आशीर्वाद.